Nei Yese eCommerce Bhizinesi Ichida Dynamic Pricing Turu? | Martech Zone
Nei Yese eCommerce Bhizinesi Ichida Dynamic Pricing Turu?
Chipiri, Kurume 10, 2020 Chipiri, Kurume 10, 2020 Langela de la Vieja
Isu tese tinoziva kuti kubudirira munguva ino nyowani yekutengeserana kwedigital kunoenderana nezvinhu zvakasiyana, saka kushandisa maturusi akakosha kwakakosha.
Mutengo unoramba uchiita mamiriro ekugadzirisa kana uchiita sarudzo yekutenga. Imwe yematambudziko makuru akatarisana neCommerce mabhizinesi mazuva ano kugadzirisa mitengo yavo kuti ienzane nezvinotsvaga vatengi vavo nguva dzese. Izvi zvinogadzira chishandiso chemitengo chakasimba chakakosha kuzvitoro zvepamhepo.
Maitiro akasimba emitengo, pamusoro pekunge iri nzira inoshanda yekuchengetedza kuve nemakwikwi mumusika, tibatsire isu kugadzira kufarira kwevatengi. Ndosaka izvozvi zvakakosha kuti chero bhizimusi reCommerce rive nechishandiso chemutengo dhizaini yekugadzira zano rayo rakanaka remitengo.
Hofori dzekutengesa pamhepo dziri kutoshandisa iyi mhando yehunyanzvi. Unogona kuona izvi neAmazon, iyo inogona kuchinja mutengo wezvigadzirwa zvayo mazana ezviuru pazuva. Iyo algorithm iyo Amazon inoshandisa inoramba iri chakavanzika kune vatengesi vanoedza kutevedzera maitiro eiyi internet hofori.
Shanduko yemutengo weAmazon inonyanya kukanganisa zvigadzirwa zvehunyanzvi. Kutenda kuhondo yemutengo wenguva dzose, chikamu ichi ndechimwe chezvakanyanya kuchinja. Nekudaro, mitengo yemitengo inoitika mune ese marudzi ezvigadzirwa zvinopihwa neAmazon.
Ndezvipi zvakanakira kuve neyakaomarara mutengo wezano?
Iyo inokutendera iwe kudzora iyo purofiti margin yechinhu chimwe nechimwe chigadzirwa nguva dzese kuchengetedza makwikwi mumusika.
Izvo zvinoita kuti iwe utore mukana wemusika mikana. Kana makwikwi akapererwa nesheya, kudiwa kwacho kwakakwirira uye kupihwa kwacho kwakadzikira. Izvi zvinoreva kuti unogona kuseta mitengo yakakwira, izvo zvinowedzera purofiti yako.
Zvinokubatsira iwe kuramba uchikwikwidza uye uchikwikwidza pamitemo yakaenzana. Mumwe muenzaniso wakajeka iAmazon, iyo, kubvira pakutanga, yatora nzira dzayo dzemitengo kune iyo max, yanga iri kiyi isingarambike yekubudirira kwayo. Iye zvino unogona kuongorora mitengo yeAmazon uye uone kuti yako marongero emitengo.
Iyo inokutendera iwe kuchenesa mitengo yako, uchidzivisa kupa zvigadzirwa zvakatengwa kunze kwemusika, izvo zvinogona kupa mufananidzo wakakanganisa kune vako vatengi nezve yako mutemo wemitengo, uye kuvadzivirira kubva pakuonekwa sevanodhura zvakanyanya kana zvakanyanya kudhura.
Imhandoi yetekinoroji inotibvumidza kushandisa ino zano?
Masystem emitengo akasimba anoda chishandiso chekuzviita, software inozivikanwa mukuunganidza data, kuigadzirisa, uye kuita zviito Mukupindura kune ese akasiyana anosanganisirwa mune algorithm.
Kuva nesoftware munzvimbo yekuita uye kugadzirisa mabasa, senge kuongororwa kwehunhu hwevatengi nemitengo yemamwe mabhizinesi ari muchikamu zvinoita kuti zvikwanise kukurumidza kuita danho rekuita sarudzo uye naro, riwane purofiti yakakura.
Zvishandiso izvi zvinovimba nedata hombe kuti riongorore misiyano yakawanda inogona kugadzirisa kutengesa munguva chaiyo. Sezvinoita chishandiso chakasimba pamutengo kubva Minderest, iyo inobvumidza iwe kuona kuti ndeupi mutengo wakanakisa wezvigadzirwa zvako nemasevhisi ari panguva dzese kuburikidza nekuongororwa kweanopfuura makumi maviri maKPI ane simba rekunyepedzera njere (AI) modhi. Mumwe nemumwe mutengesi anowana ruzivo rwaanoda kubva kumakwikwi aro nemusika. Iyi AI zvakare ine kugona kwemuchina kugona, zvichiita kuti zvikwanisike kuti sarudzo dzakaitwa munguva yakapfuura dzifunge nezvazvino. Nenzira iyi, marongero emitengo anozonatsiridzwa zvishoma nezvishoma achitungamira mukukura kwebhizinesi.
Kushandisa michina ndiyo kiyi
Dynamic pricing inzira inotanga nayo process automation. Kunyangwe hazvo ichi chiitwa chingaitwe nemaoko, kuomarara uye hupamhi hwezvinhu zvinobatanidzwa zvinoita kuti zvikoneke. Fungidzira kwekanguva zvazvinoreva kudzokorora chimwe nechimwe chigadzirwa mune katarogu yeumwe neumwe wevakwikwidzi vako mumwe nemumwe kuti abvise zvimiro zvinotonga mitengo yezvitoro zvako. Hazvifadzi zvachose.
Iri panguva yekushandisa yakasarudzika mitengo yemitengo iyo tekinoroji ye automation inopinda mukutamba, ichiita kuti zvese zvigoneke. Inoitisa zviito zvinotsanangurwa neiyi zano zvichibva pane akasiyana akapihwa uye akaongororwa. Nekudaro, muchiitiko chimwe nechimwe, mhinduro inopihwa.
Ichokwadi chekuti kuiswa kwemitengo ine simba, muchidimbu, chiito chekuzvitakura zvinoreva kuti pane chakati kuti kuchengetedza mumutengo wevanhu uye nguva. Izvi zvinobvumira eCommerce mamaneja uye vaongorori kuti vatarise pamabasa epamusoro-soro, senge kudzidza data, kutora mhedziso, uye kuita sarudzo dzakanakisisa dzebhizinesi.
Langela de la Vieja
Ángela inyanzvi mune zvebhizinesi analytics, mitengo uye manejimendi manejimendi, inotungamira zvirimo munzira dzese pamwe nekugadzirisa kuvepo pane ese mapuratifomu enharaunda.